gudaha Naples Taliyaaniga dukaanka qiimaha iibka ee ii dhow ii dhow dukaanka dukaanka alaab-qeybiyaha iibiyaha ah ee wershadaha qiimaha jaban Warshada Gearbox Reducer
Dukaanka qiimaha iibka ee Naples talyaani agtayda agtayda alaab-qeybiye warshad wax soo iibiya Low Price Lead Force Quudinta Briquette Mashiinka Iibinta soo saaraha ugufiican Qiimaha jumlada jaban
Jan 6, 2021 | Catalog Product
Waxaa intaa dheer, waxaan soo saari karnaa VARIATORS gaar loo sameeyay, MOTOORADA GARABKA AH, mootada Korontada iyo Alaabaha kale ee Haydarooliga ah iyadoo la raacayo Sawirrada Macaamiisha. Haysashada kulan qiimo leh oo la soo ururiyey ee la shaqaynta macaamiisha dibadda, Waxaan bixinaa bixiyaha OEM.
hordhaca ah hoos u dhaca hagaha xoogga quudinta briquette EPTT salling
Cadaadiska EPT ee birquetting EPTT waxay qabataa xoogga isboortiska guddoomiyaha, xoogaga EPT ee la taaban karo waxay tuujiyaan naqshadeynta soo socota. Waxay ku shaqeysaa cadaadis sare iyo adkaanta adag ee briquette, waxaana si weyn looga faa'iideystaa ganacsiga birta, kiimikaadka, iyo refractories, iyo wixii la mid ah. Lagu dabaqi karo budada limestone, magnesium oXiHu (West EPT) Budada Dis.de, budada naxaasta, budada chromium, lead, qashinka zinc, bauXiHu (West EPT) Dis.te, budada birta aanferrous, dhuxusha, budada dhuxusha, aluminium, refractory, dhoobada qaybaha, iyo wixii la mid ah.
Aragtida shaqada ee Quudinta xooga tooska ah ee qiimaha jaban ee EPTT
Martigeliyaha EPTT uu ku socdo matoorka xawaaraha korantada, pulley, spur EPT EPTT, isku xidhka EPT dhexda usha aXiHu (West EPT) Dis.s. Shafka wadista iyo shafka EPTn iyadoo la adeegsanayo EPT-da furan si loo hubiyo in ay shaqaynayso. Ka danbeysa dareenka dadban ee lagu rakibay nidaamka EPT. Cutubka quudinta Spiral ee matoorka xawaaraha korantada ee EPT, jiidashada, dirxiga EPT ayaa wareegta, walaxda si qasab ah ayaa lagu cadaadi doonaa EPTTed cadaadiska gudaha.
Astaamaha waaweyn ee Qiimaha ugu yar ee tamarta rasaasta quudinta briquette EPTT
-Taag qiimo leh oo leh shahaadada CE ISO.
-Ciidanka quudinta xoog sare nooca briquette EPTT
-EPT dhismo, saamiga briquetting la taaban karo tan iyo qaabaynta gaarka ah ee EPTT briquette
-Waxay noqon kartaa hal xariiqda wax soo saarka EPTT ama EPTT.
Waxyaabaha ku jira Roller-ku waxay noqon karaan 65Mn, 9Cr2Mo, Alloy Metal, -daawaha-chromium-gaaban iyo wixii la mid ah
-Xalka ugu dambeeya ee 70-XNUMXmm iyo qaabku wuxuu noqon karaa qaab wareegsan, barkin ampsquare.
-Injineer la heli karo si loogu rakibo gobolka macaamiisha ee EPTT briquette.
-Sii binEPTT-ga ku habboon samaynta briquettes.
-Injineer la heli karo si loogu dejiyo gobolka iibsadaha.
model Cabbirka Roller-ka (mm) Cadaadiska oo dhan
(T) Tusmada ugu hooseysa ee EPTT
(Kw) Kahor-riix EPTT
QYQ-476-1 Phi476 196 sagaashan iyo shan 45 15 1.5 1-3
QYQ-476-laba Phi476 210 sagaashan iyo shan shan iyo konton 15 mid. shan 2-afar
QYQ-520 Phi520 196 95 55 shan iyo toban 1.5 saddex-shan
QYQ-650 Phi650 196 boqol Todobaatan iyo shan 18. Shan 1.5 4-lix
QYQ-672 Phi672 275 boqol 75 22 laba.2 lix-10
QYQ-750 Phi750 196 boqol iyo labaatan boqol iyo toban 22 2.2 5-sideed
QYQ-850 Phi850 196 120 132 22 laba.2 6-toban
mid) Rakibaadda iyo talada
Marka EPTT yimaado shirkaddaada, waxaanu u diri doonaa khabiiradayada ururkaaga XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. samaynta iyo hawlgelinta website-ka. Macmiilku waa inuu ku kharash gareeyaa khidmadaha xiga ee tigidhada hawada, fuulista iyo hoyga iyo gaadiidka qaybta wax soo saarka macmiilka.
(laba) Tababarka EPTnical
Waxaan ku siinaynaa bixiye tababar farsamo oo bilaash ah alaabtaada. Qalabka tababarka waxa uu ka kooban yahay fulinta mabda'a aasaasiga ah ee EPTT, xeerarka shaqada, hababka dayactirka joogtada ah iyo tillaabooyinka, amniga, iyo kuwa kale oo badan.
Dhawr hubin oo baayacmushtarkeena ah oo tayo sare leh, dammaanad 1 12 bilood ah (ma aha incEPTT nin-soo saaray burburay). Waxaan ku sii wadi doonaa EPTT lacag la'aan ah dhibaatada tayada wanaagsan. Haddii waxyeelada ay keentay hawlgalkaaga aan saxda ahayn, EPT ee culayska ilaalinta adiga. Waxaan sidoo kale ku siineynaa bixiyaha qaab nololeedka-EPTT.
HangEPT EPT EPTlurgy EPTT EPT EPTs EPTT waa sameeye xirfad leh EPTTinging abuurista qalabka faa'iidada EPTral, ciid iyo qalabka burburinaya dhagax, qalabka birqueting, qalabka diyaarinta dhuxusha, qalajinta iyo calcining qalabka, sibidhka EPTT qalabka iyo qalabka ferEPTTzer isku dhafan.
Tags: mashiinka caadada | mashiinka | mashiinka soo saaraha | dukaan mashiinka | mashiinka qiimaha
JDLB hoos u dhige 1
bambooyin vacuum ah
Isbeddellada Qaabka B ee Loo Isticmaalayo Bushings